शरीरमा देखिएका यी लक्षण हुन् छिटो मृ’त्युको चेता’वनी चिन्ह, कतै तपाईलाई त देखिएको छैन ? – List Khabar
Home / जीवनशैली / शरीरमा देखिएका यी लक्षण हुन् छिटो मृ’त्युको चेता’वनी चिन्ह, कतै तपाईलाई त देखिएको छैन ?
शरीरमा देखिएका यी लक्षण हुन् छिटो मृ’त्युको चेता’वनी चिन्ह, कतै तपाईलाई त देखिएको छैन ?
admin October 29, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 115 Views
काठमाडौँ –शरीरमा महसुस हुने हरेक साना–ठूला परिवर्तनले मानिसको छिटो मृ’त्युको संकेत दिनसक्छ । डाक्टरले चेता’वनी दिँदै यी संकेत हरेकले बुझ्न आवश्यक भएको बताउने गर्छन् ता कि यसलाई समयमा नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।
एक शोधको आधारमा अनुसन्धानकर्ताले छिटो मृ’त्युको यो चेतावनी चि’न्ह मृ’त्यु हुनु १० वर्ष अघि नै देखिने दाबी गरिएको छ । हिँड्डुल गर्नेदेखि लिएर शरीरका विभिन्न गतिविधिमार्फत् तपाईं यसको पहिचान गर्न सक्नुहुन्छ ।
ब्रिटिश मेडिकल जर्नलमा प्रकाशित यो शोधको आधारमा विशेषज्ञले भने, ‘६५ वर्षभन्दा बढी उमेरमा ‘फिजिकल मोटर फंक्सन’ मा गिरावट हुनु मृ’त्युको बढ्दो जोखिमसँग सम्बन्धित छ ।’
यसमा हिँडाईको गती, कुर्सीबाट उठ्न लाग्ने समय, केही कुरा समात्ने शक्ति, शौचालयको प्रयोग, पकाउने र सरसामान किनमेलजस्तो केही सहज काम अह्राइएको थियो । यसमा सन् २०१९ सम्म कुनै पनि कारणले भएको मृ’त्यु पनि दर्ता गरिएको थियो ।
शोधमा पाइए अनुसार फिजिकल मोटर फंक्सनको लेभलमा कमी हुँदा मानिसको छिट्टै मृ’त्युको बढ्दो जोखिमसँग सम्बन्धित छ । रिपोर्टका अनुसार सन् २०१९ सम्म जुन स्वयंसेवीको मृ’त्यु भयो, उनीहरुको मृ’त्युभन्दा १० वर्ष अघिसम्म कुर्सीबाट उठ्ने गती बाँचिरहेका बिरा’मीको भन्दा कम थियो ।
यति मात्रै होइन, मृ’त्यु भएका स्वयंसेवकले मृ’त्युभन्दा चार वर्ष अघिसम्म आफ्नो दैनिक क्रियाकलापमा बाँचिरहेका मानिसहरुभन्दा बढी कठिनाई महसुस गरे । यो अवधिमा मृ’त्यु हुने स्वयंसेवीहरुको सम’स्या लगातार बढिरह्यो ।
शोधकर्ताले छिटो मृ’त्यु भएका २२ स्वयंसेवीमा ‘स्लो वाकिङ स्पीड’ को समस्या भेटे । १५ प्रतिशतमा कमजोर ग्रिप स्ट्रेन्थ र १४ प्रतिशत मामिलामा कुर्सीबाट उठ्दा समय लाग्नेजस्ता समस्या सम्बन्धित थिए ।
यस्तै, दैनिक क्रियाकलापमा कठिनाई मृ’त्युको ३० प्रतिशत मामिलासँग सम्बन्धित थियो । विशेषज्ञका यो चेताव’नीयुक्त चिन्ह समयसँगै बढी ग’म्भीर हुँदै गयो । नयाँ पुस्ता बाट
Previous भोलि कार्तिक१२ गते शुक्रबार,कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल
Next आज कार्तिक १२ गते शुक्रबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् राशिफल !